Halfbike - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
မာတင် Angelov နှင့် Michail Klenov ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုလောကီသားတို့သည်အထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြရမည့်အစားအဆောက်အဦးဒီဇိုင်း၏သူကား, နှစ်ခုငယ်ရွယ်ဗိသုကာဖြစ်ကြသည်။ ဒီအင်တာဗျူးမှာတော့မာတင်ရှယ်ယာဘယ်လောက်သူတို့ရဲ့စက်ဘီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူး Halfbike သူတို့မှတဆင့်သွားပြီနှင့်မည်သို့သူတို့တစ်တွေလထက်လျော့နည်းအတွက်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာခဲ့သည်အရာကိုအခက်အခဲများ, မွေးဖွားခဲ့သည်။
Halfbike အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ဘီးနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုအတှေးအထို့နောက်သင့်စိတ်ကိုဖြတ်ပြီးရောက်ကြပါ၏?
ကောင်းပြီ, ပိုင်းတွင်ငါသမားရိုးကျစက်ဘီး၏အယူအဆအပေါ်စဉ်းစားတော့တာပဲ။ ထိုအခါငါအခြို့သောအပြောင်းအလဲလုပ်စတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မအစွန်းကိုသွားလိုသောကြောင့်နည်းနည်းငါသမားရိုးကျစက်ဘီး (ကကွင်းဆက်အားဖြင့်ခြေနင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေတဲ့နောက်ဘီး) ၏ရွေ့လျားယန္တရားခွဲထုတ်ရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုရန်စိတ်ကူးမှာရောက်ရှိ ရှိသမျှသည်အခြားသောဒြပ်စင်တစ်ခုဒီဇိုင်းအသစ်အောင်ကပြုကြလော့။ ဒါဟာ Stand-တက်တဲ့ထိုင်ခုံမပါဘဲမောင်းနှင်များ၏ concept ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မူရင်းမော်ဒယ်တဦးတည်းအသေးနောက်ဘက်ဘီးနှင့်အတူရှိ၏နဲ့ကျွန်မတဦးတည်းကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူလှည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။
ဗားရှင်း 1 နှင့် Halfbike ဒီဇိုင်းဗားရှင်း2သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဘယ်လိုဒီအကူးအပြောင်း 1 တစ်နှစ်အတွင်းသာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ဘာဖွစျခဲ့အတူတကွ Michail Klenov နှင့်အတူကျနော်တို့အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်အမှုအရာတွေအများကြီးသင်ယူ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါအသင်္ချေအရာရိုးရှင်းဖို့ကိုချစ်ပြီးဒုတိယဗားရှင်းလည်းအလွန်မုန်တိုင်းထန်တစျခုဖွစျသညျတဲ့ယုတ္တိဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
frame ကိုဆောက်လုပ်ရေး၏နိယာမသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသဖြင့်, နောက်ဘီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပြီးသားငါတို့တစ်ဦးပြည့်စုံဖှံ့ဖွိုးတိုးခဲ့သည်။ ပို. ပို. ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုမှီခိုသောအရာတို့ကိုခဲ့ကြသည်။
© Halfbike; Halfbike II ၏ရေးအဖွဲ့
Kickstarter ကအတွက် Halfbike II ၏ကင်ပိန်းပြီးနောက်, သငျသညျအကွောငျးကို 1 သန်းဒေါ်လာအနိုင်ရနှင့် 2,000 အမိန့်ထက်ပိုမို။ ဒါဟာဝေးသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည် - 50 000 ဒေါ်လာနှင့် 150 စက်ဘီး။ အဆိုပါအစောပိုင်းကာလများတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သင်မည်သို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြဘာလဲ
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကို 12 နာရီကို ယူ. ကျနော်တို့ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှ ... အရွယ်ရှိ🙂အရာတစ်ခုမှာ 100 စက်ဘီး, အခြားတဦးတည်းစုဝေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် "ကောင်းကောင်း, ငါတို့ယခုဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း" - 2500 ။ ကင်ပိန်း၏အဆုံးပြီးနောက်ဒီဖြစ်ထွက်လှည့် Kickstarter ကတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အများဆုံးငွေကြေးထောက်ပံ့စီမံကိန်းကို ယေဘုယျအားဖြင့်။
အစအဦး၌အခွအေနကေိုမသိသောဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပြည့်စုံသော်လည်း, နည်းနည်း, အလုပ်ကြိုးစားမှုများနှင့်နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားစိတ်ဖိစီးမှုအချိန်လေးတဆင့်အမှုအရာအရပျသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
အကြီးမားဆုံး mobility များအတွက်ဒီဇိုင်းကို Red Dot အဘို့ဆု 2015 Halfbike ... မှချီးမြှင့်သည်တကား
အားလုံးအဓိကဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူလည်းလျှပ်စစ် actuation အပေါ်အားကိုး။ သင်ခြေထောက်, ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဘရိတ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူခြေနင်းမပါဘဲ Halfbike ၏ဗားရှင်း3မြော်သလား?
အတိအကျ။ ဒါဟာသို့သော်အချိန်ယူနှင့်ထို့ထက် ပို. အထူးကုဒီအပြောင်းအလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်း၏ဝါကြွားခြင်းမနိုင်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါဒါလုပျနိုငျသောငါ၏အသက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးလည်းမရှိရှိမရှိမသိရပါဘူး။
ငါ့ကိုဗိသုကာနှင့်အတူသိမ်းပိုက်ခြင်းကိုမများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမာန်နည်းလမ်းများမှတဆင့်သရုပ်ဆောင် undisguised mobsters ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏သာရည်မှန်းချက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများကကျွေးမွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ခြင်းကာလဘို့ကျနော်တို့ပုံမှန်၏သေးငယ်တဲ့ islet အတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နှင့်လက်ချောင်းများကိုကူး, ငါတို့သည်အနည်းငယ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရန် - ဘဝကချွတ်ဖို့သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။ ပြဇာတ်များနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များတစ်ဦးကခံစားချက်အရာအားလုံးကို၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ရပါမည်။ အဖြစ်မကြာမီကပျောက်သွားအဖြစ်ကျနော်တို့ soulless ကုန်သည်ဖြစ်လာသည်။
ကျနော်တို့သိပ်ဆူညံသံ၏အချိန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းသောရေးရာအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရနိုငျသညျ, အလွယ်တကူတန်ဖိုးရှိသောသည်အဘယ်အရာကိုထုတ် filter ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြဘူးလျှင်နေထိုင်ကြသည်။
Facebook ပေါ်မှာ Halfbike
ပုံစံ, Halfbike, စိတ်ကူး, ကုန်ပစ္စည်း, အနီရောင်အစက်ဆု, အားကစား | | rating:5/ 30